I-Semalt: Indlela yokuVimba ama-Pop-ups, Yongeza ngaphandle, Neengxaki kwi-Mozilla Firefox
Kwinqaku elilandelayo, uMax Bell, u Semalt Umphathi wempumelelo yomThengi, uchaza zonke izicwangciso ozifunayo ukuba wazi malunga nokulawulwa kwezimpuphu kwi-browser yakho ye-Mozilla Firefox.
I-pop-ups iifestile zesiphequluli ezibonakala ngokuzenzekelayo kwisiphequluli sakho ngaphandle kwemvume yakho. Abazange bazalise yonke ikhusi kwaye banokubonisa phezulu phezulu kwiphepha langoku okanye ngaphantsi kwalo (i-pop-unders). I-Firefox inesici esiyingqayizivele esivumela abasebenzisi babo ukuba baphathe bobabini abapop-ups kunye nabangaphantsi. Ukuba u tyelela iphepha lokukhetha, uya kufumana ukuba uphawu lokuvala ukukhupha luvuliwe ngokungagqibekanga - review hublot big bang. Ukuba umsebenzisi akayekanga ukukhupha ibha yomncedisi we-Firefox, iya kubonakala naliphi ixesha umkhangeli wesibhloko uvimba i-pop-up. Ikhonkco ebonisa ukukhutshwa kwe-pop-up iya kubonisa kwakhona kwibhar ye dilesi.
Ukufikelela kwiinketho zokuvimba ukukhupha kwi-site, nqakraza kwiinketho kwi-bar info okanye icon kwi-bar yekheli. Ungakhetha kwezi zinto zilandelayo:
Vumela okanye Vimbela ukukhupha kwi-site yangoku;
Hlela okukhethwa kukho kweBlocker
Khetha ukuba ungakubonisi umyalezo olwazisa ngokukhutshwa kwe-pop-up;
Bonisa iinkcukacha malunga nokukhutshwa kwe-pop-up;
Ukukhusela i-pop-ups kwisayithi kunokuphazamisa ezinye iiwebhusayithi. Ezinye iiwebhusayithi zisebenzisa i-pop-ups kwezinye zezinto ezibalulekileyo. Ukuba uvimba i-pop-ups, ukhubaza ezi zinto. Ukuvumela ezinye iisayithi ukuba ziqhube i-pop-ups ngexesha uphequlula, kuya kufuneka udibanise iiwebhusayithi ezithile uluhlu lwabo bavunyelwe ukubonisa abantu.
Ukukhusela i-pop-ups ayisoloko isebenza..Ezinye iiwebhusayithi ziyazi indlela yokusebenzisa iindlela ezingabonakaliyo, okwenza kube nzima kwi-Firefox ukukhusela ukuvela kwabo kwi-pop-ups emva kokuvalela.
Nakhu okumele ulindele kwizicwangciso ze-block-up blocker:
1. Ukufikelela kwizicwangciso ze-block-up blocker
Cofa kwiqhosha lemenyu kwikhoneni eliphezulu lasekunene kwaye ukhethe Izinketho kwimenyu yokuhla;
Thepha kwiPaneli Yobumfihlo kunye noKhuseleko;
Ungaqwalasela iiWindows kwi-Block pop-up phantsi kweCandelo leMvume;
Ngaphantsi kwithebhu engaphandle, ifayile entsha yencoko yababini ibonakala apho ufaka uluhlu lwezayithi ofuna ukuzenza;
Incoko yababini yenza ukuba:
Vumela: kukunceda ukuba ungeze iwebhusayithi kwi uluhlu lwangaphandle;
Susa isayithi: yenza ukuba ususe iwebhusayithi kwiluhlu lwangaphandle;
Susa zonke iiSayithi: ususe onke amawebhusayithi kwiluhlu lwangaphandle;
2. Yintoni eyenzekayo xa i-pop-up ingavaliwe?
Okokuqala, khangela ukuba i-pop-up ivela kwi-Firefox. Ukubonakala kufuneka kukuxelele ukuba i-pop-up ivela kwisiphequluli se-Firefox. Ukuba kwiwindow ephumayo kukho umfanekiso onommangalo odibeneyo kwisibhangqa, ngoko-pop-up ivela kwi-Firefox. Ukungabikho kwayo kuthetha ukuba usenokuba yixhoba le-malware kwikhompyuter yakho eyona mthombo wabantu bakho.
Okwesibini, khangela ukuba isayithi idibaniswe kuluhlu olungabonakaliyo. Landela inqubo yokufikelela kwizicwangciso zokuvimba ukuvota kwaye uvule ibhokisi yencoko yecandelo. Ukuba i-website ebangela ukukhupha i-pop-ups kuluhlu lwangaphandle, cofa kwiSusa iSayithi, uze ugcine kwaye uvale iphepha.
Ngamanye amaxesha iifestile ezinyukayo zihamba ngokuzikhethela yi-Firefox ukuqinisekisa ukuba ayikuvimbeli i-pop-up iziza ezifuna ukuba zisebenze. Ngoko ke, qinisekisa ukuba iwindow ibonisa emva kokuchofoza imouse okanye ucinezela iqhosha. Ukuba bayenzayo, kunye nesimo sokukhusela i-pop-up siphezu, akufuneki ukuba ukhathazeke.
Ukuba iifestile ezifakwe kwiifayile zenzelwe ukuba zibukeke njengeefestile kodwa zingenjalo, ngoko i-Firefox ayikwazi ukuyimisa.
Ekugqibeleni, ukuba i-pop-up ibonakala emva kokuvula i-Mozilla ikucela ukuba uthathe inxaxheba kwi-survey evela kwi-SurveyGizmo, yinkqubo ye-vetted program kunye ne-Firefox ayiyikuyivimba.